PVC မျက်နှာကျက် & မြို့ရိုးကို panel က
အခမဲ့-စတိုင် DIY အတွက် PVC မြို့ရိုးအပြား
အစိုင်အခဲ & ဖောင်းကြွ polycarbonate shet
ဦး PC ကိုသော့ခတ်
Wave ကို polycarbonate
ပူပြင်းတဲ့ PVC မျက်နှာကျက် & မြို့ရိုးအပြားနေမှုကိုချေဖျက်
laminated PVC မျက်နှာကျက် & မြို့ရိုးအပြား
PVC မျက်နှာကျက်ပြား, PVC မြို့ရိုးအပြား, PVC အလှဆင်ပြား, PVC မျက်နှာကြက်ကြွပ်, မျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်, အမှတ်တရအလှဆင်စာရွက်, လမိုင်း PVC ပြား, ပုံနှိပ် PVC ပြား, White က PVC မျက်နှာကျက်ပြား, Hot PVC မြို့ရိုးအပြားနေမှုကိုချေဖျက်, Multi-function တွေကို PVC အမှတ်တရစနစ်, ခေါင်မိုး စာရွက်များ။ ထုတ်ကုန်: PVC မျက်နှာကျက် & မြို့ရိုးအပြားအထူ: 5,6,7,7.5,8,8.5,9,10,12,13.5,16mm အကျယ်: 100-603mm ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အရှည်: White က, ပုံနှိပ်, Hot, လမိုင်း, Matt အသုံးပြုမှုနေမှုကိုချေဖျက်: တောင်းဆိုမှုများအရကုသမှု Surface ...
PVC မျက်နှာကျက်ပြား, PVC မြို့ရိုးအပြား, PVC အလှဆင်ပြား, PVC မျက်နှာကြက်ကြွပ်, မျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်, အမှတ်တရအလှဆင်စာရွက်, လမိုင်း PVC ပြား, ပုံနှိပ် PVC ပြား, White က PVC မျက်နှာကျက်ပြား, Hot PVC မြို့ရိုးအပြားနေမှုကိုချေဖျက်, Multi-function တွေကို PVC အမှတ်တရစနစ်, ခေါင်မိုး စာရွက်များ။
ထုတ်ကုန်: PVC မျက်နှာကျက် & မြို့ရိုးအပြား
အကျယ်: 100-603mm ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကုသမှု Surface: White က, ပုံနှိပ်, Hot, လမိုင်း, Matt နေမှုကိုချေဖျက်
ITEM ခု ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံကို ကိုးကားကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ
အခမဲ့စတိုင် Multi-function တွေကိုစနစ်ဖြင့်လမိုင်း PVC မြို့ရိုးအပြား တပ်ဆင်မှုအတွက်ကလစ်နှင့်အတူ 8 * 400mm
ခြေလှမ်းဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာလမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား 7.5 * 250mm, အလေးချိန် 2.8kg / sq.mt * 250mm 8.5, အလေးချိန် 3.4kg / sq.mt
"V ကို" groove နှင့်အတူလမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား 7.0 * 250mm, အလေးချိန် 2.8kg / sq.mt 7.5 * 250mm, အလေးချိန် 2.8kg / စတုရန်း / တန်ချိန် 7.5 * 250mm, အလေးချိန် 3.0kg / စတုရန်း / တန်ချိန်
8.5 * 250mm, အလေးချိန် 3.0kg / စတုရန်း / တန်ချိန်
"ဟုဦး" groove နှင့်အတူလမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား 8.0 * 250mm (Single-အစွန်း), အလေးချိန် 3.2kg / sq.mt
သုံးပတ်ပတ်လည်လှိုင်းတံပိုး (ထွက်) နဲ့လမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား * 250mm 8.5, အလေးချိန် 3.4kg / sq.mt
သုံးပတ်ပတ်လည်လှိုင်းတံပိုး (အတွင်းစိတ်) နဲ့လမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား * 250mm 8.5, အလေးချိန် 3.2kg / sq.mt
ငါး strips တွေနှင့်အတူလမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား * 200mm 8.0, အလေးချိန် 3.4kg / sq.mt
လေး strips တွေနှင့်အတူလမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား * 200mm 8.0, အလေးချိန် 3.4kg / sq.mt
လေးယောက်ပတ်ပတ်လည်လှိုင်းတံပိုး (အတွင်းစိတ်) နဲ့လမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား 7.5 * 250mm, အလေးချိန် 2.8kg / sq.mt
လေးယောက်ပတ်ပတ်လည်လှိုင်းတံပိုး (ထွက်) နဲ့လမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား 7.5 * 250mm, အလေးချိန် 2.8kg / sq.mt
groove နှင့်အတူလေးပတ်ပတ်လည်လှိုင်းတံပိုးတွေနဲ့လမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား
* 250mm 8.5, အလေးချိန် 2.8kg / sq.mt
ခြောက်လပတ်ပတ်လည်လှိုင်းတံပိုးတွေနဲ့လမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား 7.5 * 250mm, အလေးချိန် 2.8kg / sq.mt
2-ဦး groove နှင့်အတူလမိုင်း PVC မျက်နှာကြက် / မြို့ရိုးအပြား 7.5 * 250mm, အလေးချိန် 2.8kg / sq.mt
* 300mm 9.0, အလေးချိန် 3.0kg / sq.mt
ပိုပြီးမှိုများအတွက်လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ!
ယခင်: ပုံနှိပ် PVC မျက်နှာကျက် & မြို့ရိုးအပြား
နောက်တစ်ခု: ပူပြင်းတဲ့ PVC မျက်နှာကျက် & မြို့ရိုးအပြားနေမှုကိုချေဖျက်
အပြာရောင်က Sky PVC မျက်နှာကျက်
စျေးပေါ PVC Gypsum မျက်နှာကျက်
ဖက်ရှင် PVC မျက်နှာကျက်
ရုပ်ရှင်ပွဲတော် PVC မျက်နှာကျက်
ပြည်ထဲရေး PVC အမှတ်တရ Panel
ပြည်ထဲရေးက Wall PVC Panel
အဆောက်အဦးအပြင် PVC အမှတ်တရ Panel များ
ပလပ်စတစ် PVC မျက်နှာကျက်နှင့်နံရံ Panel ကို
ခန်းမများအတွက် PVC မျက်နှာကျက်ဒီဇိုင်း
PVC မျက်နှာကျက် Tile
လမ်းပိုင်း PVC မျက်နှာကျက်
ရေစိုခံ Wood က PVC အမှတ်တရ Panel ကို
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ PVC မျက်နှာကျက်
သစ်သား PVC အမှတ်တရ Panel ကို
Polycarbonate profile များကို
PVC profile များကို & ကလစ်များ
multi-မြို့ရိုးကို polycarbonate စာရွက်
စက်မှုဇုန်, Tudian, Tongxiang, Zhejiang, တရုတ်